INGQINISEKISO! Iminimalist yangoku @ Loop Limketkai
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguWilliam
Le yunithi yestudiyo entsha kraca kwisithili seshishini saseCagayan de Oro inemvakalelo epholileyo neyangoku kuyo, kunye ne-panoramic efanelekileyo yokujonga ukutshona kwelanga. Ibonelela ngokuzola, umoya wasekhaya owujongayo kwindawo yokuhlala, kunye nendawo efanelekileyo yeevenkile ezinkulu ezikufutshane, iivenkile zekofu, ii-ATM, iivenkile ezinkulu, iivenkile eziluncedo, kunye neeofisi zikarhulumente ezifana nePSA kunye neDFA. Ukongeza, ibonelela ngokufikelela ngokulula kuzo zonke iindlela zokuhamba, kubandakanya ijeepneys, iiteksi, kunye neemoto zabucala.
Iyunithi yethu yestudiyo yeemitha ezingama-22 ekwi-Loop Towers, iLimektkai Cagayan de Oro City ibonelela ngembonakalo ekhanyayo, isilingi ephezulu, kunye nebalcony enembonakalo entle yesixeko kunye nesitrato esihlaziyayo esinemithi engezantsi-eyona ndlela ifanelekileyo yokukhapha. kwikomityi eshushu yekofu okanye iti. Ilungele izibini, ishishini kunye nabahambi ngeeholide. Ukuba awuziva ufuna ukuphuma, le ndawo ine-49-intshi ye-smart TV ene-Netflix kunye ne-intanethi yasimahla kunye ne-Wi-Fi. Ngaphaya koko, sinezinto zokubulala iintsholongwane ezifumanekayo kuzo zonke iindwendwe zethu.
→ Ufikelelo olukhuselekileyo kwisakhiwo kunye ne-24/7 ye-concierge
→ Ukuzijonga ngokulula ngekhowudi yekhiphedi
→ Isitshixo seDijithali / ukungabikho qhosha
→ Ibhalkhoni enembonakalo entle yesixeko
→ Inendawo ebanzi yasimahla yokupaka ngaphandle kwe-condo
→ Ngaphambili LONKE IPROJEKTHI YASEKHAYA & YEKOFU
→ Indawo ekhuselekileyo kakhulu
→ Ixhotyiswe ngokupheleleyo +
→ I-intanethi yasimahla kunye neWi-Fi (umboneleli womnatha weParasat)
→ I-Smart TV onokufikelela kuyo kwiNetflix / kwiakhawunti yakho yeYouTube &
Imijelo yentambo yeTV
→ Ibhedi egcweleyo (54"x 74.5")
→ Iquka ibhedi ethokomeleyo enobungakanani obuphindiweyo bokutsala
→ Iiseti ezigcweleyo zamashiti asemgangathweni wehotele kunye neduvet yebhedi kunye neetawuli
→ Umthwalo ongaphambili Kwiyunithi yewasha kunye nesomisi esisontayo
→Ine-UV Sanitizer/Isibulala-ntsholongwane samacephe, iifolokhwe, kunye nezinti
→ Inesixhobo sokubulala iintsholongwane ngesandla esizenzekelayo/isixhobo sokuhambisa utywala
→Sihlala sicoca/sibulala iintsholongwane/sitshintsha isilayidi kwiindwendwe zethu ezintsha
→ Umgqomo wenkunkuma ongenazandla
→ Isiqhoboshi seenwele kunye ne vacuum
→ SIMAHLA! iibrashi zamazinyo ze-bamboo kunye neemaski zobuso njengesipho sethu sokwamkela iindwendwe
→ Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zombane, kuquka isikhenkcezisi, isitovu serayisi, iketile yombane, imicrowave, umpheki woqheliso, & nempahla yasekhitshini.
→ Igumbi lokuhlambela libandakanya ishawari eshushu nebandayo
→ IneSitulo sangasese seBidet esinokhetho olulula lolawulo oluphezulu okanye oluphantsi
*** Izixhobo ze-Condominium (idama lokuqubha, igadi yomgangatho ophahleni, kunye nejim yokujima) AYIFUMANEKA ngoku.
Ipropathi yethu ikwindawo yoshishino yedolophu engundoqo, ngaphaya kweProjekthi yeKofu kunye neLimketkai Drive yonke yaseKhaya. Le condo kukuhamba nje okufutshane ukusuka:
ILimketkai Mall, Robinsons' Mall, Shopwise, McDonald's, Starbucks, Fully Booked, iMAC Store, Watsons, Mercury Drugstore, National Bookstore, Iimali ezikhutshwayo ezifana neWestern Union, Lbc, Palawan, Globe & Smart Telecom, Magnum express shuttle station [shuttle ukudluliselwa ibhasi ukuya Airport], kunye nemizuzu embalwa kude PSA- Philippine Statistics Authority, Renewal Driver's License Office, ATMs (BPI, BDO, SECURITY BANK, CHINA BANK, kunye nokunye.), DFA, Cogon Market, izikhululo zepetroli, Mandaue Foam , kunye ne-USTP. Ikwakwizibhedlele zikawonke-wonke nezabucala ezikufuphi ne-850 yeemitha ukuya kwiSibhedlele saseMaria Reyna kunye ne-1.6 yeekhilomitha ukuya kwiZiko lezoNyango eliseMantla Mindanao, iSm ezantsi kwedolophu yeMall, iCentrio Mall, iGaisano Mall, iPuregold, isikhululo sebhasi saseAgora, kunye nePuntod pier/seaport.
Ukuhlangabezana nezona mfuno zinzima, iivenkile zekofu, iibhaka, iivenkile zehardware, iivenkile zekhompyuter, kunye neendawo zokutyela zininzi kule ndawo. Ke akunanto yakuzikhathaza ngokuhlala apha kuba phantse yonke into oyifunayo ilapha ukuze ukwazi ukonga ixesha, umzamo kunye nemali.
Nalu uluhlu lweendawo zokutyela ezimangalisayo kunye neevenkile zegrosari ebumelwaneni.
UMissy Bonbon Breadshop
Indawo yokutyela yaseKagay-anon
Sm ezantsi kwedolophu
IiVenkile zeGajethi zekhompyuter: